धितोपत्र बोर्डकाे अध्यक्ष छनाेट गर्न मन्त्रीपरिषद्ले समिति गठन गर्ने - Arthasansar
धितोपत्र बोर्डकाे अध्यक्ष छनाेट गर्न मन्त्रीपरिषद्ले समिति गठन गर्ने
विहीबार, ०९ मंसिर २०७८, १३ : १२ मा प्रकाशित
नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षकाे नियुक्तिलाई फेरी आवेदन खुल्ने भएकाे छ । बोर्डको नयाँ अध्यक्ष छनोटका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकले समिति छनोट गर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले समिति छनोट गरेपछि साेही अनुसार मात्रै नयाँ अध्यक्ष छनाेटकाे प्रकृया अघि बढ्नेछ ।
बोर्ड अध्यक्ष छनोटका विषयमा कानूनी रुपमा विवाद देखिएपछि नयाँ समिति गठन गरिने भएकाे हाे । धिताेपत्र समिति ऐन अनुसार नेपाल सरकारकाे तर्फबाट मन्त्रीपरिषद् बैठकले छनाेट समिति गठन गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने अर्थ मन्त्रालयले समिति बनाएकाे थियाे ।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्यक्षका लागि खोलेको विज्ञापनमा ११ जनाबाट आवेदन परेको थियाे । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, उप कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, नेप्सेका पूर्व सीइओ सिताराम थपलिया, बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाई, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व ​कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, डा. केशव प्रसाद श्रेष्ठ, रमेश हमाल, जीवन अमगाईँ, अनिल पौडेल, कृष्ण आचार्य र हेमन्त बस्यालको आवेदन दिएका थिए ।
अब फेरि बाेर्डकाे अध्यक्षकाे लागि नयाँ आवेदन लिने वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा नयाँ गठन हुने समितिले निर्णय गर्नेछ ।